Ma jiraan wax wadahadal ah oo lala yeeshay Tesla waxayna umuuqataa inaysan jiri doonin | Waxaan ka socdaa mac
Ku noqo mar kale gaariga Apple ka dib markaad aragtay sida Apple u dayactirtay wadahadal lala yeesho shirkado kala duwan qaybta baabuurta Illaa iyo hadda waxba kama been abuurmin midkoodna, indhaha oo dhami waxay u jeedaan shirkadda ugu awoodda badan qaybta suuqa baabuurta korontada ku shaqeysa. Tesla wuxuu wali kujiraa safka hore ee waaxdan laakiin waxay umuuqataa taas Apple ayaan ka go'an inuu la kulmo kuwa mas'uulka ka ah.
Markii dhammaan wararka xanta ah ee ku saabsan wada sheekaysiga suurtagalka ah ee Apple uu la lahaa shirkadaha kala duwan ee qaybta baabuurta korontada soo ifbaxa ay soo baxaan, inbadan oo naga mid ah ayaa isweydiiya waxa ku dhacaya Tesla. Waqtigaas qofka ugu weyn ee mas'uulka ka ah, Elon Musk ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray isku dayay inuu ka iibiyo Tesla Apple sanado badan kahor Cook xitaa ma rabin inuu la kulmo.
Mawduucan hore wuxuu ku soo cusboonaaday Wareysi uu weriyaha NY Times Kara Swisher la yeeshay madaxa shirkadda Apple, Tim Cook. Markii hore waxay umuuqatay inuu doonayo inuu ka fogaado jawaabta laakiin ku adkaysiga saxafiga, duqow wanaagsan qirtay:
Weligey ilama hadlin Elon in kasta oo aan maamuus weyn iyo qaddarin u hayo shirkadda uu dhistay. Waxaan u maleynayaa in Tesla uu qabtay shaqo aan caadi aheyn oo kaliya ma ahan aasaaska hoggaanka, laakiin wuxuu ilaaliyay hoggaanka muddada dheer ee ku yaal goobta EV. Marka runtii waan ku qanacsanahay iyaga.
Hase yeeshe, ereyo kooban oo aan ka hor imaanaynin wixii uu Elon Musk ku qoray bogga bulshada ee Twitter, hase yeeshe xamaasad yar muujiso by Apple oo ku saabsan ganacsiga Tesla laftiisa. Uma maleynayo in hadafka shirkada tufaaxu ay tahay inay iibsadaan Tesla. Saas ma aha waxa uu doonayo waa haddii ugu dambayn la soo saaro baabuur koronto ku socota inay ka fiicnaato kuwa ay leeyihiin Tesla. Xanta ayaa leh 2025 waxaan arki doonnaa gaariga Apple, waa waqti keliya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Ma jiraan wax wadahadal ah oo lala yeeshay Tesla waxayna umuuqataa inaysan jiri doonin.
Dukaanka elektaroniga wuxuu bixiyaa illaa afar bilood nambarro bilaash ah oo loogu talagalay Apple Music